Showing posts with label complaint-letter. Show all posts
6/07/2014 12:19:00 PM complaint-letter
ပါတီကြီးတစ်ခု၏ ကျူးကျော်ဆိုင်းဘုတ် ဖြုတ်သိမ်းပေးရန် – ပေးစာ
6/06/2014 07:43:00 AM complaint-letter
ကျွန်တော်များ နေထိုင်ရာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဏ/၁၄ ရပ်ကွက်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်စတင်၍ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မာရုံမှာလည်း ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများနှင့် ၀ါတွင်းကာလ ဆွမ်းလောင်းအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့မှ ပိုလျှံသော ငွေကြေးဖြင့် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းပြုပြင်ထားသော ဓမ္မာရုံ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ပါတီကြီး တစ်ခုမှ ရပ်ကွက် စည်းရုံးရေးမှူး (ဥက္ကဋ္ဌ)ဖြစ်သူသည် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် စည်းဝါးရိုက်၍ သံဃာ့နုဂ္ဂဟ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ အမည်ခံကာ ရပ်ကွက် ပြည်သူအများပိုင် ဓမ္မာရုံအား သံဃာ့နုဂ္ဂဟ အသင်းဆိုင်းဘုတ်ကို မတရားသဖြင့် ကျူးကျော်၍ တပ်ဆင်ထားခြင်းအတွက် ပြန်လည်ဖြုတ်သိမ်းပေးပါရန်။ (ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး၏ ပါတီစည်းရုံးရေးကို ဘာသာရေး ခုတုံးမလုပ်ဟုဆိုခြင်း အပေါ်၌ မယုံကြည်စရာ ဖြစ်ပါသည်။) စည်ပင်ပိုင် ပလပ်မြေများသည် ပြည်သူပိုင်၊ အများပိုင်မြေများ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် အနိုင်ရပါတီမှ ကျွန်တော်များ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၁၄ ရပ်ကွက်၊ ပန်းခြံ ၂၆ ရှိ ပလပ်မြေကို ပါတီသစ်ပင် စိုက်ခင်းအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အ၀ီစိတွင်းတူးရာတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က လူလုံးပြ အကာအကွယ် ပေးခြင်းများ တရားမ၀င် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ပါ၍ အများပိုင်မြေ၊ ပြည်သူပိုင်မြေ ပေါ်တွင် ပါတီစိုက်ခင်းအဖြစ် ဆိုင်းဘုတ် တင်ထားခြင်းကို တားမြစ်ဖြုတ်သိမ်းပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ (သစ်ကုလားအုပ် ပုံပြင်မှ ခေါင်းလေးဝင်ပါရစေ၊ ကိုယ်လေးဝင်ပါရစေနှင့် တူနေပါသည်။)
6/03/2014 05:51:00 PM complaint-letter
စစ်တွေ ၊ ၀၃ ဇွန်လ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ တိုင်စာ ] အပြည့်အစုံသို့ »
5/30/2014 12:14:00 PM complaint-letter
BY HOTNEWS အပြည့်အစုံသို့ »
5/19/2014 11:09:00 PM complaint-letter Myanmar-news
မလာမနေရ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆေးရုံရောက်
5/13/2014 03:37:00 AM complaint-letter Myanmar-news
မိုးမိတ်၊ မေ ၁၂။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မိုးမိတ်မြို့နယ် မန်ကျည်းပင်ကျေးရွာတွင် မလာမနေရ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလုပ်အားပေးစေခိုင်း
မှုကြောင့် တဲအိမ်တစ်ခုပြိုကျရာတွင် အသက် (၄ဝ)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ မိုးမိတ်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အရေးပေါ်လူနာအဖြစ်
“ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေကို ခွန်အားမမျှတဲ့ လုပ်အားခိုင်းစေမှုတွေ လုပ်ခိုင်းပါတယ်၊ ခိုင်းတာကရွာလယ်တံတားပါ၊ ဒါပေမယ့် ရွာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်တဲ့ ကျွဲတဲ
တစ်ခုကို လူအားနဲ့ဝိုင်းရွှေ့ခိုင်းပါတယ်။ ကျွဲတဲပြိုကျပြီး သစ်သားတန်းတစ်ခုက ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျရင်း အခုလိုဆေးရုံရောက်ရတာပါ။ ဆရာဝန်ကတော့
နောက်ကျောခါးရိုးထိသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပြီးမှသိမှာတဲ့၊ ကျွန်မကမုဆိုးမပါ။ သမီးနှစ်ယောက်အတွက် ရှာကျွေးနေရတာ။လုပ်အားပေး
မလာရင် ငွေတစ်သောင်းပေးပြီ လူငှားနေရတော့ မငှားနိုင်ဘူးလေ၊ မလာမနေရ လုပ်အားပေးဆိုပြီး ကျမတို့ရွာသားတွေကိ်ု အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ဆိုင်ရာတွေက အနိုင်ကျင့်
နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဘာအာမခံချက်မှလည်း မရှိဘူး၊ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဖြစ်နေတယ်။ ရွာမှာက ဒီလိုပဲ ခဏခဏ ဖြစ်နေကြတယ်”ဟု ဒဏ်ရာရသူ ဒေါ်ခင်မာသီ
မန်ကျည်းပင် ရွာလယ်တံတားဆောက်ရန် ရွာသူ/သားအယောက်(၅၄)ဦးအား မလာမနေရ လုပ်အားပေး၍ တံတားဆောက်ခိုင်းသည်ဟု သိရသည်။ယင်းတံတားကို
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သည်ဟု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ဆိုထားကြောင်းသိရှိရသည်။
ရွာသားလုပ်သားများက အဆိုပါတံတားအတွက် အုတ်၊ သဲ၊ သစ်သားပြားများကို သယ်ပေးရပြီး၊ တံတားအနီးဆယ်ပေအကွာရှိ ကျွဲတဲအား တံတားနှင့် မလွတ်၍ လုပ်အား
ပေးရွာသားများကို ရွှေ့ခိုင်းရာမှ ကျွဲတဲပြိုကျပြီး ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထက်ပါ လုပ်အားပေးဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မန်ကျည်းပင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးအေးသောင်း က “တံတားလုပ်အားပေးဖို့ ကျွန်တော်စီစဉ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊
ရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဥက္ကဌက စီစဉ်ပြီး ကျွန်တော်တို့က ဝိုင်းဝန်းပေးတာပါ၊ ကျွဲတဲကိုလည်း ကျွန်တော် မရွှေ့ခိုင်းပါဘူး၊ကျွန်တော့်အဖွဲ့က လူတစ်ယောက်ကရွှေ့ခိုင်းတယ်လို့
သိရပါတယ်၊ အခုလိုထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်သွားတော့ မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကားငှားပေးပြီး မိုးမိတ်ဆေးရုံကို ပို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်၊
ဒဏ်ရာရသူအတွက် ကျွန်တော့်ငွေနဲ့စိုက်ပြီး ကူညီပေးတာပဲလေ”ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
ယင်းတံတားတည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေ ဆယ့်ငါးသိန်းဖြင့် ဆောက်လုပ်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေမလုံလောက်၍ ယခုလိုရွာလုပ်အားပေး
ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ၎င်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ဆိုထားသော်လည်း ကျေးရွာလူထုကို အတိအလင်း ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း ကျေးရွာလူများထံမှသိရှိရသည်။
အဆိုပါမလာမနေရ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုကို မကျေနပ်သည့် လုပ်အားပေးထဲမှ (၃၈)ဦးက နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO)သို့ လက်မှတ်ထိုး တိုင်ကြားထားကြောင်း
“ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ဒီလိုလုပ်အားပေးခိုင်းခံနေရတာ ခဏခဏပဲ၊ ရွာသားတွေက အရင်အစဉ်အလာအတိုင်း အကြောက်တရားတွေ ရှိနေတယ်လေ၊ စားဝတ်နေရေး
အဆင်ပြေလား၊ မပြေလား မထည့်တွက်ဘဲ သူတို့အမိန့်အာဏာအောက်မှာပဲ နေရသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ရွာမှာသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ ထင်ရင် ဒုက္ခပေးဖို့လည်း
ဝန်မလေးကြဘူးလေ၊ ဥပဒေမဲ့ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်၊ အမှန်အတိုင်းပြောရင်လည်းနည်း အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်ခံနေရသလိုပါပဲ၊ ဒါကြောင့် ခုလို ILO နဲ့တိုင်ကြားထားးပါတယ်”ဟု
အထက်ပါ ILOနှင့် ဆက်သွယ်ကူညီပေးသူ မိုးမိတ်မြို့ခံ မရီရီဝင်းက`“ပြည်သူတွေကို မနိုင်ဝန်လုပ်အားပေးခိုင်းတာဟာ အတင်းအဓမ္မမြောက်ပါတယ်။ မလာမနေရဆိုတာ
အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့မိုးမိတ်မှာ ဒီလိုပဲ အဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေရှိတယ်၊ လုပ်အားပေးမလာရင် ငွေနဲ့လူငှားလိုက်နေရတယ် ဆိုတော့ ကျွန်မတို့မြို့ရဲ့
အခြေအနေကို စဉ်းစားသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေရတာပါ၊ ဒီလိုဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလို ILO နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးရတာဟာလည်း မိုးမိတ်မှာ
လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လို ချိုးဖောက်ခံနေလဲ ဆိုတာသိအောင်လို့ လုပ်ရတာပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာရမျိုးသမီးကို ရွာသားတစ်ဦးက မိုးမိတ်ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ရွာတာဝန်ရှိသူ လူကြီးများက အလေးထားကူညီမှုအားနည်းကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ လုပ်အား
ပေးခိုင်းစေမှုကြောင့် ဒုက္ခကြုံရသောပြည်သူများအတွက် ဥပဒေအရအာမခံမှု မရှိကြောင်း၊မိုးမိတ်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်ကျေးရွာများတွင် မလာမနေရ လုပ်အားပေးအစဉ်အလာ
ကြီးမားနေပြီး ငွေကြေးကောက်ခံမှုများလည်း မကြာခဏဖြစ်နေသည့်အပြင်၊ အဆိုပါကျေးရွာတွင် ကျောင်းနေအရွယ် မိန်းကလေးများပါ မကျန် ခွန်အားနှင့်မမျှဘဲ လုပ်အား
ပေးခိုင်းခံနေရကြောင်းကို ကျေးရွာသားများထံမှ သိရသည်။
5/08/2014 07:08:00 PM car-news complaint-letter
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့် ကြေးမုံ သတင်းထောက်ဟု ဆိုသူတို့မှာ သင်္ကြန်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအား ပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့၍ အရေးယူပေးပါရန်
5/02/2014 01:55:00 PM complaint-letter
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ၁၃၇၅ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်အောင်ထွန်းတို့က ဝါသနာအရ သီချင်းဆိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ ၄င်း၏အာဏာကို အသုံးပြုကာ နေ့စဉ်စင်ပေါ်တက်ကာ လူငယ်များအား စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင် သီချင်းများ နေ့စဉ် သီဆိုခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ကြေးမုံသတင်းထောက်ဟုဆိုသော သန်လျင်မြို့နယ်မှ သတင်းထောက် တစ်ဦးသည်လည်း ပြည်သူများအား စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေအောင် စင်ပေါ်တက် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသည် မည်သို့မျှ ကြည့်လို့မရအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ၄င်းတို့နှစ်ဦးအား အာဏာပြခြင်းနှင့် ပြည်သူများကို စိတ်အနှောက်အယှက်ြဖစ်စေခြင်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ကို အသုံးခြင်း ပြုလုပ်သူများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ အနေဖြင့် နှောက်နောင် မည်ကဲ့သို့ မပြုလုပ်ရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ/ပြည်သားများက တင်ပြထားရှိကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
5/02/2014 06:04:00 AM complaint-letter
4/20/2014 03:01:00 PM complaint-letter
4/18/2014 11:11:00 AM complaint-letter
4/18/2014 11:07:00 AM complaint-letter
4/11/2014 10:56:00 PM complaint-letter
ပြည်မြို့က ပြည်သူတစ်ဦးတင်ပြလာသည့် ခရီးသွားလာမှုနှင့် ပါတ်သတ်သည့် အခက်အခဲ - ပေးစာ
4/02/2014 03:35:00 PM complaint-letter
ပြည်မြို့ကတာဝန်သိတတ်သော စည်ပင်. ယဉ်ထိန်းနှင့် မိဘပြည်သူများခင်ဗျား . . .
ပြည်မြို့မဈေးကြီး . ရှေ့ဆောင်ဘဏ် . ကုန်ရောင်းကုန်ပြုလုပ်ရာပွဲရုံကြီးများ ပထမပုဂလိကဘဏ် . အနောက်ဘက်ကမ်းကားများဂိတ်သတ်မှတ်ရာနေရာ . မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် . ကမ္ဘောဇဘဏ် နှင့် ဧရာဝတီဘဏ်တို့ စုဝေးရာလမ်းဆုံဖြစ်ပါသည် . လမ်းဆုံဆိုပေမဲ့ လမ်းကသာမန်မျှသာကျယ်ဝန်းပါသည် .
အဓိကပြသနာမှာ အောက်ပါမြင်ကွင်းတိုင်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်းယဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူများနှောင့်နှေးကြန့်များကြုံတွေ့နေရပါသည် . မပြောပလောက်သောအရာဟု တာဝန်ရှိသူများထင်မှတ်နေပါသည်
အာဏာပိုင်တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမှာ မိမိတို့ရုံးစားပွဲမှာထိုင်ရုံနဲ့ငွေရနေသည့်အပေါ်တွင်သာယာနေကြပြီး ပြည်သူတို့၏ အခက်ခဲများကို အနည်းငယ်မျှ
ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် မစဉ်းစားပေးနိုင်လောက်အောင် လစ်လျူရှူထားကြပါသည် . မထင်မှတ်ထားသော ဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သော အသက်အန္တရာယ်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေရသော်လည်းကောင်း . မီးဘေးအန္တရာယ်အရသော်လည်းကောင်း သွားလာရန်အခက်ခဲဖြစ်နိုင်ပါသည် '
အထက်ပါပြသနာရပ်များ မဖြစ်မီကကြိုတင် ၍ ကာကွယ်နိုင်ရန်
ထိုပြသနာရပ်များအတွက် ပြည်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတို့အား ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် '
* ဘဏ်များသို့လာသော ကားများ ယာဉ်2ထပ် ရပ်နားမှုများ ရှိနေခြင်း
* လမ်းစည်းကမ်းနှင့်မညီဘဲ မြို့တွင်းလိုင်းကားများလမ်းဆုံလမ်းဂွ၌ရပ်၍ခရီးသည်ကြ်ိုခြင်း
* စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲပေးနိုင်မည့် ယဉ်ထိန်းအရာရှိ မထားရှိခြင်း
Saw Kyi Phyu
Myanmar CNN အပြည့်အစုံသို့ »
3/29/2014 08:28:00 PM complaint-letter
3/28/2014 06:27:00 PM complaint-letter
3/27/2014 02:01:00 AM complaint-letter Myanmar-news
( ယနေ.ထုတ် Tomorrow သတင်းဂျာနယ်အမှတ်(၅)တွင်လည်း
ပေးစာတစ်စောင် အနေဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ် )
တီဗီ programmer တစ်ခုမှာ presenter လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်
အကြောင်းကို ကြားခဲ့တာကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဘူး။
ဇာတ်လမ်းတိုရိုက်ကူးရေးမှာ သူကိုပါဝင်ဖို့ဆိုပြီး သူဌေးက ဇာတ်ညွှန်းမိတ္တူ တစ်ခု
ပေးလိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲတလောမှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူလည်း
သူချစ်သူနဲ့ ခိုးရာလိုက်သွားတယ်။. အဲအချိန်မှာဇာတ်ညွှန်းမိတ္တူကိစ္စကိုသူလည်း
သူတို့လည်းသွားလိုက်ပါတယ်။စခန်းလည်းရောက်ကော စခန်းမှုးက ဘာမှမပြောပဲ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး အချုပ်ထဲ တန်းထည့်လိုက်ရော။သူတို့လည်းဘာကိစ္စကြောင့်
သူ့ကိုဖမ်းလည်း လို့လည်းမေးကောစခန်းမှုးကဇာတ်ညွှန်း မိတ္တူ ပါသွားလို
ကလည်း ချတွေလည်းစား အရေးမကြီးလောက်ဘူးဆိုပြီး သူ့အမေကလည်းမသိပဲ
သူတို့သူဌေးကလက်မခံဘူးတကယ်ဆို ဇာတ်ညွှန်းက မှုရင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး.. မိတ္တူ ပါ..သူရောင်းစားလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး...တကယ်ကို တိုက်တိုက်
ဒီနေ့နဲ့ဆို အချုပ် မှာ ၁ပတ်ရှိသွားပါပြီ အာမခံလည်းမရပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်
တို့သူငယ်ချင်းတွေသူ့ သူဌေးကိုသွားဆွေးနွေးပါသေးတယ်။သူ့ သူဌေးပြောပုံက
” ကားတစ်စီးဝယ်ပေးမှကျေနပ်ပါမယ် ” တဲ့။
တကယ်ဆို ဒီကိစ္စက ဒီလောက်ထိ ဖြစ်ဖို့လည်းမသင့်ပါဘူး လျော်ကြေးယူရင်
အဆုံး အချုပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှမထားချင်လို့ကတကြောင်းသူစိတ်ထိခိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုကတကြောင်းနောက်ဆုံးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာတင်ထား
ကို ရဲ လေးယောက်နဲ့ထိန်းထားပါတယ်။
လုပ်ပုံထောက်တော့သူ့ သူဌေးမှာဘာအကြံအစည်များရှိနေလဲ မသိပါဘူးဗျာ။
တကယ်တမ်းတော့ နှမချင်းကိုယ်စာတတ်ရင် ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး ကျွန်တော်
သိသလောက်တော့ ရဲစခန်းက ခဏဆိုပြီး ခေါ်တွေ့ပြီးတစ်ခါတည်းဖမ်းချုပ်လို့
မရပါဘူး ။ သူတို့လုပ်ပုံက အရင်ခေတ်ထောက်လှန်းရေးတွေ ခဏဆိုပြီးခေါ်ပြီး ဖမ်းချုပ်ထားသလိုပါပဲဒါဘယ်လိုမှမတရားမှန်းသိကြမှာပါ။လက်ရှိတော့
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ရှိပါသေးတယ် တဲ့။
သတင်းတင်ပြသူ- Cobra NL.